Vaovao - Ny fitsipika miasa amin'ny famolavolana bobongolo sy ny fizotrany.
Amin'ny dingam-pamokarana bobongolo, ny ampahany amin'ny bobongolo matetika dia mila nohosorana. Ny fifehezana ny haitao poloney dia afaka manatsara ny kalitao sy ny ain'ny serivisy amin'ny bobongolo ary hanatsara ny kalitaon'ny vokatra. Ity lahatsoratra ity dia hampahafantatra ny fitsipika miasa sy ny fizotran'ny famolahana bobongolo.
1. Fomba fanosorana bobongolo sy fitsipika miasa
Ny famolavolana bobongolo mazàna dia mampiasa kofehin'ny vato misy solika, kodiarana volon'ondry, taratasy fotsy, sns, ka ny endrik'ilay faritra dia simba amin'ny endrika plastika ary ny ampahany mivaingana amin'ny velaran'ny sangan'asa dia esorina mba hahazoana ambonin-tany malama, izay matetika atao amin'ny tanana . Ny fomba fikolokoloana faran'izay tsara sy ny poloney dia takiana amin'ny kalitaon'ny avo lenta. Ny fikosoham-bary tsara indrindra dia namboarina tamin'ny fitaovana fikosoham-bary manokana. Ao anatin'ilay ranon-javatra poloney misy abrasive dia apetaka amin'ny tampon'ny masinina mba hanaovana fihetsika mihodina haingana. Ny famolavolana dia mety hahatratra ny hatevin'ny Ra0.008μm.
2. Ny fizotran'ny famolahana
(1) poloney masiaka
Fametahana milina tsara, EDM, fikosoham-bary, sns.. Dia azo nohosorana amina poloney mihodina miaraka amin'ny hafainganam-pandehan'ny 35 000 ka hatramin'ny 40 000 r / min. Avy eo dia misy ny fikosoham-bato menaka tanana, vato vato misy menaka miampy solitany ho lasa menaka manitra na «coolant». Ny filaharan'ny fampiasana dia 180 # → 240 # → 320 # → 400 # → 600 # → 800 # → 1 000 #.
(2) Famolahana semi-tsara
Ny famaranana amin'ny antsasa-jato dia matetika mampiasa taratasy sande sy solitany. Ny isan'ny taratasy fasika dia milahatra:
400 # → 600 # → 800 # → 1000 # → 1200 # → 1500 #. Raha ny marina, ny takelaka # 1500 dia mampiasa vy bobongolo mety amin'ny fanamafisana (eo ambonin'ny 52HRC) ihany, ary tsy mety amin'ny vy efa nohamafisina, satria mety hiteraka fahasimbana eo ambonin'ny vy efa nohamafisina ary tsy hahatratra ny vokatra nilamirana.
(3) Manosihosy tsara
Ny famolavolana tsara dia mampiasa paty masiaka diamondra. Raha ny fikosoham-bary amin'ny kodiarana lamba poloney mba hampifangaro vovoka manidina diamondra na paty marokoroko dia 9 μm (1 800 #) → 6 μm (3 000 #) → 3 μm (8 000 #). Ny fametahana diamondra 9 μm sy ny kodiarana lamba ao anaty volo dia azo ampiasaina hanalana ireo mariky ny volo amin'ilay taratasy sandoka 1 200 # sy 1 50 0 #. Ny poloney avy eo dia tanterahina amin'ny paty sy paty diamondra araka ny filaharan'ny 1 μm (14 000 #) → 1/2 μm (60 000 #) → 1/4 μm (100 000 #).
(4) Tontolo iainana voadio
Ny fizotran'ny fanosorana dia tokony hatao amin'ny toerana miasa roa, izany hoe ny toerana fanodinana fikosoham-bary ary ny toerana fanodinana fanosorana tsara dia nosarahana, ary tokony hitandremana ny fanadiovana ireo sombin-fasika sisa tavela eo ambonin'ny sangan'asa tamin'ny teo aloha. dingana.
Amin'ny ankapobeny, aorian'ny famolahana mafy ny vato misy menaka ka hatramin'ny 1200 # ravin-kazo, dia mila nohosorana madio ilay fitaovana, mba tsy hadio, mba tsy hisy vovoka ao amin'ny rivotra mifatotra amin'ny velaran'ny bobongolo. Ny fepetra takian'ny fahamarinana mihoatra ny 1 μm (ao anatin'izany ny 1 μm) dia azo tanterahina ao amin'ny efitrano famolahana madio. Ho an'ny famolahana mazava tsara kokoa dia tsy maintsy ao anaty toerana madio tanteraka izy io, satria ny vovoka, setroka, dandruff ary rano mitete dia afaka manapotipotika voadio tsara.
Rehefa vita ny fizotran'ny famolahana dia tokony ho voaro amin'ny vovoka ny velaran'ny sangan'asa. Rehefa mijanona ny fizotran'ny fanosorana dia tokony esorina tsara ny abrasive sy ny menaka manitra rehetra mba hadio fa madio ny velaran'ny sangan'asa, ary avy eo ny sosona lasitra anti-harafesina tsy maintsy esorina eo ambonin'ny lafin-javatra.